Ordovician fauna: njirimara, mmalite na ikpochapu | Network Meteorology
Oge Paleozoic nwere ihe dị ka oge isii ma otu n'ime ha bụ Oge Ordovician. Ọ bụ otu n'ime oge ndị dị na ozugbo Oge Cambrian na tupu Oge Silurian. Ihe e ji mara ya bụ oke mmiri dị elu nke kpatara mmụba nke ndụ mmiri na usoro okike. Na Ordovician anụmanụ nwere oke mbelata ihe di iche-iche na njedebe nke oge n'ihi ihe mkpochapu.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara anụmanụ Ordovician yana mkpa ya.
1 Njirimara nke oge Ordovician
2 Ndụ Ordovician
3 Ordovician anụmanụ
4 Mkpochapu oke nke Ordovician
Njirimara nke oge Ordovician
Tupu anyị mara ụmụ anụmanụ ndị na-achị anụmanụ ndị Ordovician, anyị ga-amata ụdị njirimara niile nke oge a. O were ihe dị ka nde afọ iri abụọ na otu nwere ọdịiche ihu igwe dị mkpa n'etiti mmalite ya na njedebe ya. Na mbido oge enwere oke okpomọkụ, mana ka oge na-aga na usoro mgbanwe gburugburu ebe obibi, ọnọdụ okpomọkụ belatara nke ukwuu. Ọ nwere oge afọ ice.
Otu njirimara nke oge Ordovician pụtara bụ Mbibi nke mkpochapu kpochapụrụ 85% nke ụdị ihe ndị dị ndụ, ọkachasị usoro okike mmiri. Banyere geology nke oge Ordovician, anyi choputara na e kewara mbara uwa n'ime ndi isi ala 4: Gondwana (nke kachasị ukwuu), Siberia, Laurentia na Baltica. Ihe ochie nke enwetaghachiworo site na nkume site n'oge a bụ isi nkume dị egwu.
Banyere ihu igwe, anyị na-ahụ na ọ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ na mbido. Temperaturesfọdụ okpomọkụ ruru ụkpụrụ nke 60 Celsius. Agbanyeghị, na ngwụsị nke oge a, ọnọdụ okpomọkụ belatara n'ụzọ dị otu ebe na enwere glaciation dị mkpa. Ọnọdụ glaciation a metụtara kọntinent nke Gondwana. N'oge ahụ, kọntinent a dị na ndịda nke mbara ụwa. A ka amabeghị ihe na-akpata glaciation, mana ọtụtụ na-ekwu maka mbenata ikuku carbon dioxide. A ka na-eme nyocha iji chọpụta ihe kpatara ya.
N'oge Ordovician enwere otutu ndu di iche iche. Karịsịa nke bi n’oké osimiri ka emepụtara. Anyị ga-eme nkenke nyocha banyere flora nke Ordovician. N’iburu n’uche na ndụ niile gbara gburugburu, ọ dị mkpa iburu n’obi na e nwere ndị nnọchi anya si n’alaeze Plantae ọkachasị na ụfọdụ ndị sitere n’alaeze Fungi.
Green algae juru ebe nile na oke mmiri ma ufodu udiri ero dika nke mejuputara oru dika ihe ndi ozo: igbari ma ghasaa ihe ndi ozo. Enweghi ihe ndi ozo nke uwa na osisi, obu ezie na ufodu ndi ozo malitere ichi ala ala. Ihe ndị a bụ osisi ndị mgbe ochie na-esighi ike. O nweghidị xylem na phloem system. N'ihi nke a, ha ga-anọrịrị nso na mmiri iji nweta akụ a.
Anyị ga-akọwa ihe anụmanụ Ordovician bụ na njirimara ya bụ isi. Ekwesiri imesi ya ike na umu anumanu nke Ordovicia juputara n’osimiri. E nwere anụmanụ dịgasị iche iche site na obere na nke ochie na ndị mepụtara ma nwee mgbagwoju anya.
Anyị na-amalite na arthropods. Ọ bụ oke ọnụ ọgụgụ n'oge Ordovician. N'ime ndị nnọchianya nke ọnụ a anyị nwere ike ịkọ banyere brachiopods, trilobites na akpị mmiri. Ndia nwere otutu ihe nlere na umu anumanu nke kesara n’oké osimiri n’oge a. Enwekwara ụfọdụ ụdị crustaceans.
Banyere ndị na-akpụ akpụ, ha malitere mgbasawanye nke evolushọn. Nautiloid cephalopods, bivalves na gastropods nwere n'ụsọ ụfọdụ. Gastropods kwagara n'ụsọ oké osimiri ahụ, mana ọ laghachiri ibi na mpaghara mmiri dika ha nwere iku ume. Eziokwu a apụtaghị na enwere ike ịgbasasị ha ebe niile. Ọ bụ ezie na azụ dị adị kemgbe Cambrian, azụ ndị dị ka coccosteus malitere ịpụta n'oge anụmanụ ndị Ordovician.
Enweghị ekele maka coral naanị, mana ha bidoro ịkọkọta ọnụ. N’oge a, emepụtara coral coral mbụ ama ama. Fọdụ ụdị spong adịlarị na-agbanwe site n'oge gara aga.
Mkpochapu oke nke Ordovician
Dịka anyị kwurula na mbụ, otu n’ime njirimara ndị pụtara ìhè n’oge a bụ otu n’ime mkpochapụ ndị kpochapụrụ 85% nke anụmanụ ndị dị n’oge ahụ. O mere ihe dịka 444 nde afọ gara aga na njedebe nke oge Ordovician na Silurian. Ndị ọkachamara nwere ike ịkọ nkọ maka ihe kpatara mkpochapụ a ji mee. O nwere ike ịbụ n'ihi mgbanwe mgbanwe ọnọdụ gburugburu ebe obibi n'oge ahụ. Ọmụmaatụ, bụ maka mkpochapu mbelata nke ikuku carbon dioxide. Nke a nyere aka na mbelata gas na ntinye ya na nsonazụ. N'ihi ya, e nwere mbelata na gburugburu ebe obibi okpomọkụ ụwa.
Mbelata okpomọkụ a mere ka ọ bụrụ afọ ice nke kacha emetụta Gondwana. Naanị ụdị dị ala nke ụdị dị ndụ n'oge glaciation. Ihe ọzọ mere ndị sayensị ji kwenyere na oke mkpochapụ bụ n'ihi na-agbadata ogo mmiri. Usoro a mere n'ihi ịbịaru oke ala buru ibu nke dị n'oge ahụ. Nke a kpatara mmechi nke oke osimiri Lapetus n'ozuzu ya. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ụdị dị ugbu a dị na ebe obibi mmiri, ọ kpatara ma ọ bụ mkpochapụ nke ọtụtụ n'ime ha.
Tọ ụtọ bụ isi ihe kpatara oke mma nke mbibi a. A kwenyere na ọ metụtara nbelata ikuku carbon dioxide. Ndị lanarịrị jisiri ike mee ka ọnọdụ okpomọkụ na mgbanwe ọnọdụ gburugburu ebe obibi belata. Ihe ikpeazu mere ndi sayensi jiri chee na mkpochapu bu n'ihi ihe gbawara nnukwu ugwu. E mepụtara tiori a n’ime afọ iri mbụ nke narị afọ nke iri abụọ na otu ma kwuo na ihe kpatara ya bụ na nnukwu ihe gbawara na mbara igwe. Nke a rụpụtara na igwe gamma site na ntiwapụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Ordovician.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ordovician anụmanụ
Ofdị ụyọkọ kpakpando